China ALUMINUM LATTICE PANEL fekitari uye bhizimisi | Alucosun
Alucosun Latest ® inosvitsa chizvarwa chitsva chinoumbwa nemapaneru muunyanzvi hwealuminium pachinzvimbo pane zvakajairwa polyethylene kana chicherwa-chakazadzwa musimboti. Ichi chigadzirwa chitsva chinonzi aruminiyamu lattice pani inovandudzwa naAlucosun yezvinyatso kudikanwa zvemitemo yekudzora moto mune zvigadzirwa zvekuvaka.
Yakagadzirwa ne100% aruminiyamu dhizaini, Alucosun aluminium lattice pani inosanganiswa neinoshamisa kupisa moto kuita, kureruka uye kurerukirwa kwekugadzirwa kwezvimisikidzo kunoita Alucosun aluminium lattice pane pane vavaki kurota.
Aluminium lattice pani inoumbwa neasinga pise aluminium musimboti uye sandwiched pakati pe 0.7mm ne 0.5mm gobvu aluminium (yekunze giredhi yeAA3003 kana AA5005) yekumashure pamusoro.
EU BS EN 13501-1 Maitiro emoto- A2
Kugadzirwa kweutsi- s1
Madonhwe Anopfuta- d0
HURE HURE 3MM, 4MM
MBERU GANDA RAKAKONZERA 0.50MM, 0.60MM, 0.70MM
UPENYU 1220MM, 1250MM, 1500MM, SIZE Yakagadziridzwa
Kureba ZVAKASIYANA 1000MM-5000MM
Uremu 3.8KG / M (0.5,0.4 / 4MM); 4.3KG / M (0.7,0.5 / 4MM)
● Chiedza chechiedza:
Iine hunyanzvi hwetekinoroji tekinoroji, Alucosun lattice pani ine yakareruka uremu huremu uchienzaniswa neyakajairwa isingaite zvinhu zvemoto izvo zviri kureruka kare kupfuura zvimwe zvinhu zvine kuomarara kumwe chete. Iyo inochengetedza yako yekufambisa mutengo uye yevashandi mutengo zvakare.
● Kuita kusina moto:
Ichi chimiro chinovimbisa iyo pani yekusa-kutsva uye inoita kuti iwedzere kuvimbika uye inozivikanwa mune ese façade kunyorera, kunyanya muUSA (NFPA285), UK (BS 476-4 standard) neAustralia (AS1530.1 standard) uko kune yakanyanya kudikanwa uye kudanira pane kudzosera kumashure.
● Zvakatipoteredza zvine hushamwari:
Kuve nhengo yepasi redu, isu tine basa rekuchengetedza nyika yedu. Yedu corrugated aluminium musimboti weAlucosun A2 pani ndeye 100% inogadziriswazve. Zvakare hapana kusvibiswa panguva yekugadzirwa uye kushandiswa.
● Peel Simba
Aluminium lattice pani yepakati haina nonaborbent zvinhu zvakafanana nezvakavhara maviri machira. Izvo zvakafanana zvinhu zvinowana kushoma kwekuwedzera kwekuwedzera uye kudzvinyirira kushushikana. Zvichakadaro isu tine peel simba rekuyedza vhiki rega rega mumazuva makumi matatu mushure mekugadzirwa. Mapaneru edu haana delamination-isina.
● Utsi Huturu
Kufa kwemoto kwakawanda hakukonzerwi nekutsva, asi nekupfungaira utsi, Alucosun A2 musimboti iri pure aluminium uye isingatsve. Nepo iwo macores eimwe yechinyakare isina moto pani ari makemikari ezvinhu, saka mapaneru edu matsva akachengeteka zvakanyanya uye akavimbika nekuti haina yekuregedza kana ichipisa.
Aluminium lattice pani yealuminium yakakosha iri nyore kutemwa uye kugadzirwa uye kushoma kupfeka pane ma routers. Naizvozvo, inochengetedza bhajeti yako uye nguva. Zvinotora pamaumbirwo akasiyana siyana uye kugadzikana kwayo hakukanganisa kugadzikana kwayo kana hutano.
ZVIMWE MUedzo WEKUEDZA CONDITION kana UNIT RESULT
Unit Kurema ASTM D 792 Makirogiramu / m² 4.3
Aluminium Mberi Yakakura - mm 0.7
Bemhapemha ukobvu EN ISO 2360-2003 μm 32
Penzura Kuomarara ASTM D3363 HB min 2H
Impact Nemishonga ASTM D2794 kg.cm ＞ 110
Bemhapemha Kuchinja-chinja ASTM D 4145 T-kukotama (0-3T) 2T
Kupfeka Adhesion ASTM D 3359 Hapana kunamatira kurasikirwa Yakapfuura
Ruvara Kuchengetedza ASTM D 224 Max Kuera 5 Units mushure me4000 Maawa Yakapfuura
Gloss Kuchengetwa ASTM D 523 80% mushure maawa 4000 Yakapfuura
Chalk Kuramba ASTM D 4214 Max Kuera 8 Units mushure me4000 Maawa Yakapfuura
Kubikira Kwemvura Kuramba AAMA 2605 100 kwemakumi maviri emaminitsi Asingasviki 5% 4B
Muriatic Acid Kuramba AAMA 2605 Madonhwe e10 e10% HLC, 15mins Hapana kutuka
Alkali Nemishonga ASTM 1308 10%, 25% NaOH, 1 Hora Hapana shanduko
Munyu Spray Kuramba ASTM B117 Upto 4000 Maawa Hapana shanduko
Yakaderera- Yakanyanya Kupisa - -40 - 80 Hapana shanduko
Peel Simba ASTM D 1781 mm · N / mm 140mm · N / mm (Ganda repamberi) 125mm · N / mm (Rear ganda)
Tensile Simba ASTM E8 Mpa 5mm / Maminitsi, 69MPa
Yakayerwa Inzwi rekudzora index ISO 717-1: 2013 db 22 (-1, -2)
Yakajairwa garandi ndeyegumi nemashanu - makumi maviri emakore zvinoenderana nenzvimbo yemapurojekiti chaiwo. Makore makumi matatu garandi inowanikwa kune epamusoro-anokwanisa epasi zvigadzirwa zvakasarudzika.
Mavara akasiyana siyana uye ekupedzisa sarudzo anoita Alucosun Dzazvino®sarudzo yaunofarira yekuvaka envelopu. Mhando dzakasiyana dzemitambo, kusimba kwemapendi masisitimu mhando yekupedza nezvimwe. inoigadzira isuti kune chero chishandiso chekuvhara chero chiri chivakwa chekutengeserana, iconic chimiro ine yakasarudzika kuzivikanwa kana yakasimbiswa brand. Alucosun Latest®inopa akasiyana siyana eyakajairwa uye echinyakare apedza kunze kwe-mukati imba coil yekumhara nzvimbo. Alucosun Latest® nzvimbo yapera nePVDF neNANO pendi system mu ichienderera mberi coil yekumhanyisa maitiro inoona mhando uye kuenderana mukuteedzana neAAMA 2605 kududzirwa.
NANA-PVDFpendi yekuzvichenesa. Yakadai Paint system inopa yakawedzera yakajeka yepamusoro jasi ine yakanyanya-yakasangana-yakabatana NANO zvidimbu paPVDF Pedza; iyo inovimbisa kumeso pamusoro. Yakatsetseka uye yakajeka nzvimbo inoita tsvina uye guruva difcult kunamatira pane izvo zvinopa chivakwa kugara chakachena kutaridzika. PVDF neNANO pendi masisitimu akasimba kwazvo anovimbisa makore gumi nemashanu kusvika gumi nemashanu ekupedza garandi.
ANODZIDZWA mapaneru ane akasiyana siyana eFInish sarudzo anowanikwa muAlucosun®zvisinei inozviisa pasi peimwe nguva uye kukura kweganho. Inowanzo chengetedzwa neanodized layer mapaneru anogara kwenguva refu akakwenenzvera anopa garandi makore makumi matatu
Pe uye HDPEmapendi anoshandiswa zvakawandisa mune akawanda mashandisirwo nekuda kwenzvimbo dzakakura dzemavara uye hupfumi-kufunga, ikozvino garandi makore anogona kuwedzerwa kubva pamakore mashanu kusvika pamakore masere nemhando dzakasiyana dzekupfeka. HDPE inogumisa inowanikwawo seyakajairwa pendi system.
Kana aruminiyamu lattice pani iri pasi pemucheto kupeta kuvakwa, ichave iri grooving pamucheto peta chikamu uye inogona kuvhura V-groove uye U-groove, nezvimwewo maererano nemupendero peta chinodikanwa, dzinoverengeka zvakajairika nzira dzegurati. Ichashandisa yakakosha michina yekumatira yealuminium pani kuti ive nechokwadi chekudzika kwakadzika hakusi kukuvadza pakatarisana nealuminium zvinhu uye ichasara ne0.8 mm gobvu. Inogona kutora matanho ekusimbisa seyakakomberedzwa mbabvu, nezvimwewo sezvazvinodiwa pachikamu chegraoving.
Pashure: Aluminium chinoumbwa Panel (FOR SIGNAGE)
Zvadaro: ALUMUMUM HUKU HWENHUKU